Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore waxay siisaa fursado koritaan iyo taageero carruurta iyo qoysaskooda. Ilmo kasta oo u dhexeeya dhalashada illaa shan sano oo leh dib u dhac horumarineed oo muuqda, oo buuxiya shuruudaha u-qalmitaanka ee waxbarashada gaarka ah ee carruurnimada hore, ayaa u-qalma inuu helo adeegyo.
Haddii aad ka walwalsan tahay sida ilmahaagu u dhaqaaqo, wax u arko, u maqlo, u ciyaaro, u hadlo, ama u dhaqmo, u gudbinta baaritaan bilaash ah ayaa lagu dhammaystiri karaa barnaamijka Minnesota Help Me Grow.
Adeegyada Faragelinta Dhallaanka & socodbaradka
Igu Caawi Inaan Koboco Minnesota
Dhalashada ilaa Da'da 2
Wax ka qabashada Hore waa adeegyo la siiyo cunug iyo qoyskooda markii canugga lagu arko inuu xaq u leeyahay iyadoo lagu saleynayo xaalad caafimaad ama dib u dhac ku yimid horumarka, marka loo eego shuruudaha gobolka. Adeegyadan ayaa ka dhaca goobta dabiiciga ah ee ilmaha oo badiyaa qoysaska ayey ku saleysan yihiin. Adeegyada waxaa bixin kara macalinka waxbarashada khaaska ah ee caruurnimada hore, khabiirka hadalka / luuqada, daaweeyaha shaqada, daaweeyaha jireed iyo / ama bixiyeyaasha kale iyadoo lagu saleynayo u-qalmitaanka iyo baahida.
Da'da 3 illaa 5
Adeegyada waxbarashada gaarka ah waxaa la siiyaa carruurta u-qalma ee jira da'da 3 illaa laga soo galayo xanaanada carruurta kuwa buuxiya shuruudaha gobolka waxbarashada gaarka ah. Adeegyadan waxaa badanaa lagu bixiyaa qaab iskuul ku saleysan baahiyaha gaarka ah ee canug walba. Adeegyada waxaa bixin kara macalinka waxbarashada khaaska ah ee caruurnimada hore, khabiirka hadalka / luuqada, daaweeyaha shaqada, daaweeyaha jireed iyo / ama bixiyeyaasha kale iyadoo lagu saleynayo u-qalmitaanka iyo baahida.